Horyaalka Uu Doonayo Inuu Ka Ciyaaro Xidiga Gabriel Jesus Oo La Ogaaday
HomeWararka CiyaarahaHoryaalka uu doonayo inuu ka Ciyaaro Xidiga Gabriel Jesus oo la ogaaday
May 13, 2022 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga 0
Weeraryahanka Manchester City Gabriel Jesus ayaa lagu soo waramayaa inuu ku adkeystay inuu doonayo inuu baaqi kusii ahaado Premier League xilli ay jiraan warar xan ah oo sheegaya inuu u dhaqaaqayo xagaagan kooxo kale.
25-sano jirkaan ayaa si aad ah loola xiriirinayay inuu u dhaqaaqayo Arsenal toddobaadyadii la soo dhaafay, xitaa ka hor inta aysan City xaqiijin imaatinka Erling Braut Haaland ololaha 2022-23 ee Borussia Dortmund .
Iyada oo imaatinka Haaland uu qarka u saaran yahay inuu ku riixo Jesus inuu hoos u dhigo heerka sare ee Etihad Stadium, xiddiga reer Brazil oo galaya sanadka ugu dambeeya ee qandaraaskiisa bisha June, kooxda heysata Premier League ayaa laga yaabaa inay eegaan inay lacag kaash ah ku helaan weeraryahanka xagaagan.
Iyadoo ay jiraan warar sheegaya inuu u dhaqaaqi karo Gunners, The Sun ayaa ku warameysa in wakiilka Jesus uu daaha ka qaaday inuu doonayo inuu sii joogo horyaalka England.
Warbixinta ayaa muujineysa sida ay Arsenal ugu qaadan karto inta u dhexeysa 40 ilaa 50 milyan ginni si ay u hesho adeegiisa, iyadoo kooxda Waqooyiga London ka dhisan ay ugaarsaneyso weeraryahan cusub xagaagan, taasoo ay ugu wacan tahay Alexandre Lacazette iyo Eddie Nketiah oo laga yaabo inay beeca xorta ah kaga tagaan.